के गर्यो नेपाली सेनाले यस्तो ? आयो विवादमा ! « Etajakhabar
के गर्यो नेपाली सेनाले यस्तो ? आयो विवादमा !
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७६, शनिबार ०८:०९
माओवादी लडाकु समायोजन पूरा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाको बन्दोबस्तीसम्बन्धी सामग्री बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद भइरहेको छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भएपछि जारी कार्यविधिलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदा सामान आपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको हो ।